Muuse Biixi oo ka hadlay kulankii Madaxweynaha Soomaaliya iyo FeysaL Cali Waraabe • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Muuse Biixi oo ka hadlay kulankii Madaxweynaha Soomaaliya iyo FeysaL Cali Waraabe
Muuse Biixi oo ka hadlay kulankii Madaxweynaha Soomaaliya iyo FeysaL Cali Waraabe
July 21, 2018 - By: Keyse Aadan
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay markii ugu horeysay kulankii dhawaan dhexmaray Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Feysal Cali Waraabe iyo Cali Khaliif Galayr.
Muuse Biixi ayaa sheegay inay ku noqotay amakaag kulankii gudoomiyaha xisbiga UCID uu la yeeshay Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamad Cabullaahi Farmaajo, wuxuuna caddeeyey in Feysal Cali Waraabe maamulkiisa uusan matalin, isla markana aysan quseyn maamulka Somaliland kulankii ay wadayeesheen isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya.
Feysal Cali Waraabe ayaa horey u sheegay in uu ku matalayo Somaliland shirk Brussels ee arrimaha Soomaaliya, kaasi oo dhacay 16-kii ilaa 17-kii bishaan July.
…Amakaag ayey nagu noqotay xitaa ma aanan ogeyn in uu baxay, isagoo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamad Cabdullaahi Farmaajo la joogo un baan aragnay, mana dhici karto, mana aqbali karno ayuu yiri Muuse Biixi Cabdi.
Somaliland aya sheegtay in waxba uusan ka khuseyn shirka Brussels, maadaama sida ay sheegtay uu yahay mid loo qabtay dowladda Soomalaiya iyo maamul goboleedyada.
Feysal Cali Waraabe kulankii uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegayaa in uu buuq siyaasadeed ku abuuray Somaliland, iyadoo xisbiga mucaaradka ah ee WADANI uu ku eedeeyey madaxweyanaha Somaliland in iyaga ay dirsadeen Feysal Cali Waraabe.